Top7 LxA: Iyo Yakanakisa Linux Laptops | Linux Vakapindwa muropa
MuLxA takuunzira iyi posvo na iwo mashanu epamusoro malaptop iwe unogona kuwana. Saka iwe unogona kutenga yako ramangwana laptop nekusarudza kubva kune imwe yepamusoro 7 malaptop atinogona kutenga neGNU / Linux inoshanda system isati yaiswa. Nenzira iyoyo, hatizofaniri kushandisa kana senti kutenga laptop neMicrosoft Windows, kubhadhara rezinesi reOEM rekambani yeRedmond kambani tobva taguma kuchibvisa nekuisa Linux distro.
Nezvo kwete chete urikubhadhara microsoftIwe unenge uchitengawo komputa yaunofanirwa kuumbiridza uye kugadzirira kuisa yako yaunofarira kugovera. Ko kana nemutengo mumwe chete ivo vatozviita kwauri? Izvo hazvingave zvinonakidza here? Zvakanaka ndizvo zvatinoenda nerunyorwa urwu rwemalaptop. Uye zvakare, iwe unofanirwa kuziva kuti kana uchigadzirisa zvimwe zvikamu zvinouya nemuchina-zita michina, zvinoenderana nemamiriro evimbiso, ivo vanogona kuirasa uye isu taizofanira kutarisira matambudziko anogona kumuka nemidziyo mitsva.
Pasina kumwe kunonoka, ngatiendei kune avo vanomwe yakanaka yeLinux nyika, izvo zvingave zviri nenzira iyi yatinokurudzira:
1 KDE Slimbook II:
2 Slimbook Eclipse:
3 Slimbook PRO2:
4 Kuchenesa Librem 13:
7 SYSTEM76 Darter Pro:
KDE Slimbook II:
KDE Slimbook II: Slimbook uye KDE? Chii chinogona kukanganisika? Icho chiri Katana II ultrabook musiyano kubva kuSpanish yakasimba Slimbook ine chigadzirwa chine kupera kwakanakisa, zvese maererano nedesheni uye mhando yezvinhu. Asi kumeso kwakanaka hakusi kwese, uye pasi peichi chitarisiko kunovanza Hardware inokanganisa.
Tinogona kuvimba nema processor Core i5 uye i7 kusarudza sezvatinoda, pamwe neakasiyana masimba eDDR4 RAM (8-16GB), uye M.2 SSD madhiraivha akaomarara, kuti vakwanise kubhururuka neako KDE Neon distro pre-yakaiswa. Uye ichatobhururuka zvakatonyanya kufunga nezve optimizations yakaitwa muKDE Plasma desktop nharaunda, iyo yabva pakuva yakasimba kwazvo asi inorema saizi sezvairi pamberi pekuchengeta mabhenefiti ayo ese neiyo shoma RAM yekushandisa iyo ine zvishoma kuita shanje dzakareruka desktop mamiriro ...
Slimbook Eclipse: munzvimbo yechipiri takaisa chikara chaicho chechiratidzo ichi, uye kwete nekuti chakanyanya, asi nekuti zvimwe hachina kuitirwa chikamu chevashandisi chakafara senge yapfuura. Mune ino kesi, iri laptop ine simba kwazvo iyo yakanganwa kumwe kwekufamba kuti ikupe iwe isingaenzaniswi simba yenyika yekutamba.
Saka kana iwe uri mumwe we 'vakanaka' vatambi, ndiko kuti, avo vanomhanya Linux, iyi ndiyo yakakodzera iwe. Ndiri kutaura nezve komputa ine Intel Core i7 microprocessors yeiyo HQ nhepfenyuro, uye kadhi yemifananidzo NVIDIA GeForce GTX 1060. Iine inosvika 4GB DDR32 RAM uye inokurumidza yakasimba solid state dhiraivha kana maSDD. Pasina kukanganwa kutonhora kukuru kwekubvisa kupisa kwese kunoitwa nechikara chekuita. Nekudaro, kunze kwekutamba, hunhu hwayo hwaizoitawo kuti ive yakakwana kune yehunyanzvi nyika, kunyanya kana iwe ukashanda nemaitiro ehurongwa ...
Slimbook PRO2: munzvimbo yechitatu imwe Slimbook yakapinda mukati zvakare, ino nguva iyo PRO2 inotipa hwaro hwakasimba hwekushanda naye. Mune ino kesi, iwe une lightweight Laptop, ine aluminium yekupedzisira uye yakashongedzwa dhizaini iyo inovanzawo zvine simba Hardware kubva kumusoro mhando, seSlimbook yakajairwa.
Ehezve, senguva dzose, unogona sarudza iyo inoshanda sisitimu kuti iwe unoda kuiswa mune iyo configurator yechitoro chako. Kusiya jira simbi uye pendi kuseri, kana isu tikazarura iyo 'hood' yemidziyo iyi tinowana 5th Gen Intel Core i7 kana i8 processor, DDR4 inosvika 32 GB, M.2 SSD madhiraivhi akaomarara anosvika ku1TB, uye skrini yakazara yeHDHD saka kuti aiwa unosuwa ruzivo. Akanaka hunhu kune avo vakazvipira kushandiswa kwehunyanzvi senge kuona, dhizaini, kusimudzira, nezvimwe.
Kuchenesa Librem 13:
Kuchena Librem 13: isu tinotora kumwe kusvetuka kudiki toenda kuPurism Librem, imwe yeanozivikanwa pasi rese remahara software. Iyo dhizaini inotarisana nerusununguko uye kuvanzika, iine musimboti kuve neakavhurika firmware panzvimbo yekuvhara BIOS / UEFI. Inosanganisira 7th Gen Core i7 processor, 4 kusvika 16GB RAM, Intel UHD mifananidzo, uye 13 ″ skrini. Iyo ine mwero uye yakati yechinyakare Hardware iyo inowedzera kana tichifunga kuti mutengo wakanyanya kukwirira kupfuura zvigadzirwa zveSlimbook zvine zvakawanda zvine simba uye zvakagadziridzwa Hardware.
Ehe zvinouya neiyo distro pachayo inonzi PureOS iyo yatatotaura nezvayo muLxA. Nezve izvo maficha, iwe unogumira kune vashoma vashandisi vari kumhanyisa undemanding software asi vanoda iyo yekuwedzera rusununguko.
Dell XPS 13 (Nyowani): Mugadziri weUS Dell zvakare ane Laptop iyo inobata kune nyika yeLinux uye yakavhurwa sosi software. Ndiyo XPS yakavandudzwa, nekuti iyo Yekuvandudza Dhizaina yatobviswa. Naizvozvo, iyo ultrabook kufunga kune vanogadzira. Inosanganisira pre-yakaiswa Ubuntu kugovera uye yazvino chizvarwa Hardware sezvazviri mune iyo Slimbook: 7th Gen Core i8, LPDDR3 RAM inosvika 16GB, M.2 SSD kusvika ku512GB uye 13 ″ skrini. Chinhu chakanyanya kushata nezvemidziyo iyi zvakare mutengo wakaita sePurism, nekuti mutengo unosvikira pamazana gumi nemazana maviri emadhora kusvika pamazana mashanu ezviuru (zvichienderana nekugadziriswa)
ASUS R570ZD-DM107: Laptop kubva kumugadziri mukuru, ine mhando yakanaka kwazvo uye ine mutengo wakaderera kune vashandisi vazhinji. Zvishandiso AMD Ryzen 5 2500U se processor, 8GB yeDDR4 RAM, 1TB ye hard disk, NVIDIA GeForce GTX 1050 uye 15,6 a skrini. Iyo haina Linux pre-yakaiswa, asi hainawo Microsoft Windows, nekudaro unenge wakasununguka kuisa iyo yaunoda uye haubhadhare rezinesi. Iyo Laptop inogona kunge isipo-munzira uye kune yakawanda huwandu hwebasa kana mutambo, asi kupikisana nayo ine iyo iyo isina iyo system yatove yakaiswa. Izvi kana iwe uri mushandisi wepamberi unogona kuve mukana wakanaka kuzviisa kune zvaunofarira, asi kwete kune vashandisi vasina ruzivo rwehunyanzvi.
SYSTEM76 Darter Pro:
System76 Darter Pro: Ndinofunga iwe unotoziva System76, uye ichi chigadzirwa chatakataura nezvacho kare. Kana iwe uchida kutenga chigadzirwa kubva kune ino North America inogadzira neLinux pre-yakaiswa, iwe unofanirwa kuziva kuti inouya neiyo distro Pop! _OS pre-yakaiswa (yatakataurawo nezvayo), 5th Gen Intel Core i7 kana i8, DDR4 kusvika 32GB, M.2 SSD kusvika 2TB, uye, ichi chingave chinhu chisina kunaka, mifananidzo yeIntel UHD iyo isiri kushamisika .. Chimwe chirevo Chikonzero chisina kunaka nei tachiisa pachinzvimbo ichi ndechekuti webhusaiti yese iri muChirungu uye izvi zvinogona kunge zvichitadzisa vamwe vashandisi. Mukuda, zvinofanirwa kutaurwa kuti sevhisi yekutengesa inosvika kune dzimwe nyika, kusanganisira Spain.
Ndinoda kuwedzera, uye neizvi ini ndatovhara chinyorwa, Slimbook, ari mupepeti wechiSpanish, technical technical kana rubatsiro zvichave zvirinani, pasina kusangana nemaitiro anosemesa kubva kune makuru magadziri ayo pakupedzisira anozononoka kana kushanda ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Top7 LxA: Yakanakisa Linux Laptops
A. Maestre akadaro
Thinkpads ndiwo akanakisa linux makomputa. Ini ndinoshandisa maviri acho mazuva ese, kunyanya maT450 uye zvinofadza.
Pindura kuna A. Maestre
KuReclanlanet tinounganidza malaptop akagadziridzwa aine pre-yakaiswa Linux uye 1 gore garandi kubva kune akanakisa mabhureki, kunyangwe panguva ino June 2020 isu tine mashoma kwazvo.
Pindura ku recyclanet
Iyo nyowani vhezheni yeGodot 3.1, yakavhurika sosi yemitambo injini, inosvika